အကယ်၍ သင်ဒီနေ့မကြားရသေးဘူးဆိုရင်၊ မနက်ဖြန်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရသောအရာဖြစ်သည်။ ကြက်သားထုပ်မှာတောင်သောကြာနေ့ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်အတွင်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာမည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုနားထောင်နေကြသည်။ ပြီးတော့ဒီနေ့အထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးမှာလိုချင်တဲ့စမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ဖို့အတွက်ပါ။
သင်သည်သင်၏စားသုံးသူလှုံ့ဆော်မှုများကိုသည်းခံနိုင်ခဲ့သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်ကံကောင်းပါစေ။ အားလုံးနီးပါးစတိုးဆိုင်များက Black သောကြာနေ့၏အခါသမယတွင်ပရိုမိုးရှင်းစတင်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောရယ်စရာသောကမ်းလှမ်းမှုများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မထိုက်တန်ပါ။ ဒီနေ့သေတ္တာထုတ်ကုန်များတွင်အလင်းတစ်မျိုးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်.
1 သင်သောကြာနေ့က Black အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိရင် box ထဲမှာအလင်း
1.1 Xiaomi က Mi A1
1.2 Xiaomi Redmi A4 ဂလိုဘယ်
1.3 Xiaomi က Redmi 4X
1.4 Xiaomi က Mi 6
1.5 ကျနော်တို့ Xiaomi ကရောသမ 2
1.6 Doogee ရောနှောခြင်း 2
1.7 Lee က Leeco le Max2
1.8 Doogee ရောနှော Lite
သင်သောကြာနေ့က Black အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိရင် box ထဲမှာအလင်း
Light ထဲမှာအကွက်ထဲမှာသူတို့ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အဖျားကိုထည့်ချင်သည်။ ထိုသူတို့ကအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထင်ရှားတဲ့မြှင့်တင်ရေးများစွာစတင်, ကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်ပြုမိပါပြီ။ ဤဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ် ၀ င်စားစေမည့်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Xiaomi က Mi A1
၎င်းသည်ယခုနှစ်အတွင်းနှစ်ထောင်နှင့်ခုနစ်ကာလအတွင်းထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သောကိရိယာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ရက်ရက်ရောရော display ကိုအတူ 5,5 လက်မ မယုံနိုင်လောက်အောင် resolution နှင့်အရောင်များကိုကမ်းလှမ်း။ ၎င်းတွင်အစွမ်းထက်သည့်မှတ်ဉာဏ်ရှိသည်4GB RAM နှင့်အတူ 64 GB ကိုအတူလိုက်ပါ ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း။ ၎င်းပရိုဆက်ဆာမှကျေးဇူးတင်စွာကြီးစွာလုပ်ဆောင်သောအစိတ်အပိုင်းများ Snapdragon 625 octa-core။ ကို C12 megapixel အနောက်ကင်မရာ။ နှင့်များစွာသောဘက်ထရီ 3.080 mAh ဘက်ထရီ.
ကုမ္ပဏီမှ“ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကွဲလွဲနေသည်” ဟူသောကုမ္ပဏီမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖုန်းတစ်လုံး။ ထိုသောကြာနေ့ Black မြှင့်တင်ရေး box မှ Light ကသင့်အားမူလစျေးနှုန်းနှင့် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် Xiaomi Mi A1 သည်သင်အတွက်သင့်အတွက်ဖြစ်သည် သာ 186,66 ယူရို။ ထွက်ပြေးမသွားပါစေနဲ့။
ဤနေရာတွင် Xiami Mi A1 ကိုအကောင်းဆုံးစျေးဖြင့်ဝယ်ပါ။
Xiaomi Redmi A4 ဂလိုဘယ်
သင်မယုံနိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော Xiaomi မော်ဒယ်တစ်မျိုး။ box ထဲမှာအလင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိရိယာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်းပေးထားပါတယ်။ နှင့်အတူတစ် ဦး ကစမတ်ဖုန်း ငါးလက်မမျက်နှာပြင် 4G နည်းပညာနှင့်အတူ နိမ့်ကျသည်ဟုယူဆရသည့်တိုင် Snapdragon 425 တွင် solvent quad-core ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်။
အင်္ဂါရပ်တွေ2GB RAM မှတ်ဉာဏ် နှင့်အချို့သောစဉ်းစားလို့မရဘူးအတူ GB အထိသိုလှောငျ 32 ပြည်တွင်းရေး။ ၎င်း၏အဓိကကင်မရာတွင်အာရုံခံကိရိယာရှိသည် ဆယ် megapixels ။ ထိုအကတပ်ဆင်ထားသည် 3.120 mAh ဘက်ထရီ တစ်ရက်ခွဲထက်ပိုသောကြာချိန်ကိုပေးသည်။ အခုတော့သင့်အတွက်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 80,41 ယူရိုs ။ တစ် ဦး ကအကြီးအလျှော့စျေး။
၅၅% လျှော့စျေးဖြင့်သင်၏ Xiaomi Redmi 4A Global ကိုဝယ်ပါ။
နှင့် "ooooother" Xiaomi ကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ သင် Xiaomi သည်ဖက်ရှင်ကျနေသည်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။ ဤအရာ၏သက်သေသာဓကမှာကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသောမယုံနိုင်လောက်သောပရိုမိုးရှင်းများဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်စမတ်ဖုန်းရှိသည်။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာမှာမှတ်ဉာဏ်ရှိတယ် 3GB RAM နှင့်ရရှိနိုင်သောသိုလှောင်မှု 32 GB ကို။ ၏ကင်မရာ 13 megapixels စဉ်းစားရန် resolution နှင့်ပြတ်သားမှုပေးထားပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Snapdragon 435 octa-core ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုအကကြီးမားတဲ့ရှိပါတယ် 4100 mAh ဘက်ထရီ။ ဒီ Xiaomi ကို ၁၀၅.၀၅ ယူရိုသာမကုန်မှီဝယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Xiaomi Redmi 4X ကိုဒီလောက်ဈေးမယူပါနဲ့။
ဤရွေ့ကားကြီးမားသောစကားလုံးများကိုဖြစ်ကြသည်။ Black သောကြာနေ့ကျေးဇူးတင်စကားကြောင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းသည် Light Box ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအရောင်းအဝယ်လည်းဖြစ်သည်။ စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာ အသုံးပြု၍ ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောစမတ်ဖုန်း Snapdragon 835။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာအချို့ရှိပါတယ် RAM6GB နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှု။
ဒါဟာအံ့မခန်းရှိပါတယ် 12 megapixel ပေါင်း XNUMX megapixel dual ကင်မရာ။ မည်သည့်ကင်မရာကိုမဆိုလှောင်ပြောင်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး။ လှပပြီးအလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ တ ဦး တည်း 3.350 mAh ဘက်ထရီ ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့ဘဝကိုတစ်နေ့လုံးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။
ဒီမှာ Xiaomi Mi6ကိုယူရို ၃၂၃.၂၂ ။
ဒီမှာ Xiaomi အိမ်ကကိတ်မုန့်ပေါ်ကိုအေးခဲစေတယ်။ သံသယအရှိဆုံးသူကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည့် quintessential တရုတ် phablet ။ "enooooorrme" ၄.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ဒီကိရိယာကိုမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကစားရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်6GB RAM နှင့် 64 GB ကို သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသိုလှောင်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ကင်မရာနှင့်အတူ 12 megapixels။ အစွမ်းထက် Snapdragon 835 နှင့်ရက်ရက်ရောရော 3.400 mAh ဘက်ထရီ။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ 426,48 ယူရို.
သင်၏ Xiaomi Mi Mix2ကိုသင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ပါ။
Doogee ရောနှောခြင်း 2
နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ဖုန်း ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုကြီးမားစေသည့်ကြီးမားသည့် ၆ လက်မအရွယ် panel ပါ ၀ င်သည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Octa-Core၊ RAM6GB နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှုပမာဏကိုရပ်တန့်နိုင်သည့်အဘယ်သူမျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Doogee Mix2သည်စွမ်းအင်လုံလောက်မှုမရှိသကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် resolution နှစ်ခုပါဝင်သည့် dual-lens ရှိသည် 13 megapixel နှင့် 16 megapixel ရှိသည်။ ဒီတော့အရာအားလုံးဟာတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးအထိပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားတာပါ 4.060 mAh ဘက်ထရီ။
၁၇၇.၇၆ ယူရိုသာအတွက် Doogee Mix2ကိုယခု ၀ ယ်ပါ။
Lee က Leeco le Max2
ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးဖုန်းတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ပြသတာလား။ ဒီ Lee Leeco Le Max2မှာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ် 5,7 လက်မ ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ visors ဆင်းချိန်ညှိ။ ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ရုပ်အသွင်အပြင်နှင့်ဒီဇိုင်းဖြင့်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည် Snapdragon 820 ။
မှတ်ဥာဏ်ရှိတယ် 4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုများအတွက်မှတ်ဉာဏ် 32 GB ကို။ တစ် ဦး ကသပိတ်မှောက် ၏ troasero ကင်မရာ 21 megapixels 8 megapixel ဖောင့်နှင့်အတူ။ တ ဦး တည်း 3.100 mAh ဘက်ထရီ။ Light ကိုသေတ္တာထဲမှ Black Friday နှင့် ၁၃၁.၉၆ ဒေါ်လာသာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါ။
Lee Leeco Le Max2သည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
Doogee ရောနှော Lite
တစ်ကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့စျေးနှုန်းမှာအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖုန်းထက်ပို။ Doogee Mix Lite တွင် ၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကျဉ်းမြောင်းသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Quad Core၊2GB RAM နှင့် 16 GB သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၏။
ဒါဟာရှိပါတယ် 13-megapixel ကင်မရာတကယ်ရလဒ်ကောင်းတွေရတယ်။ ပြီးတော့ 3.080 mAh ဘက်ထရီ ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းစမတ်ဖုန်းကိုသင်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းပိုမိုသုံးနိုင်သည်။ Doogee Mix Lite ကိုသောကြာနေ့မကုန်မီတွင် ၇၉ ယူရိုသာ ၀ ယ်ပါ။
ကောင်းမွန်သော၊ ကောင်း။ တကယ့်စျေးပေါသောဖုန်း ဖြစ်၍ သင်၏ Doogee Mix Lite ကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ။
HomTom ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစွမ်းအားရှိသလောက်ကြော့ရှင်းသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သေတ္တာထဲမှအလင်းသည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်အကြီးအကျယ်လောင်းသောကုမ္ပဏီများက၎င်း၏ Black သောကြာနေ့ကိုလောင်းသည်။ ကိရိယာတစ်ခု ၅.၇ လက်မ "Infinity" display ဒါကသင့်ကိုလျစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူး။
၎င်းတွင် Octa Core ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 64 GB enviable စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်ကပ်။ ယင်း ကင်မရာနှစ်လုံးသည် 16-megapixel နှစ်ခုနှင့်ငါး megapixel အာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်အသီးသီး။ ထိုသို့တပ်ဆင်ထားလာပါတယ် 3.400 mAh ဘက်ထရီ။
ယခုအခါ HOMTOM S8 ကို ၁၂၅.၇၀ ယူရိုသာဝယ်ပါ။
ကျနော်တို့ကအရသာအားလုံးနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်အားလုံးအတွက်စမတ်ဖုန်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးသည်အားသာချက်ယူပြီးထိုက်တန်သောစျေးနှုန်းနှင့်လျှော့စျေးများကိုကမ်းလှမ်းရန်သဘောတူကြသည်။ surelyကန်အမှန် သင်မမှားပါလိမ့်မယ်သင်ရွေးချယ်သောရွေးချယ်ပါ။ ဤအခါသမယတွင် Black Friday သည်စမတ်ဖုန်း၏သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားသက်သာအောင်ကူညီသည်။
ဒါဆိုမင်းကဒီအချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ရင် ပြေးကြပြီ။ မှတ်တမ်းအတွက်၊ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပေးခဲ့တယ် သေတ္တာထဲကအလင်းရောင်ကဒီရူးနေတဲ့အနက်ရောင်သောကြာနေ့မှာအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေပစ်ချလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့အတူတူဤမျှလောက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမြင်သည်အထိအကယ်စင်စစ်ကရှည်လျားသောအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အနက်ရောင်သောကြာနေ့အလင်းရောင်ကိုသေတ္တာထဲမထားပါနှင့်
သင်ပိုမိုတိကျစွာချန်ထားသည့်ဘက်ထရီကို Google ကပြလိမ့်မည်